Uncategorized | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
တစ်ဦးတယ်လီဖုန်းနံပါတ်သုံးပြီးမေးလ် recover လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အပေါ် Posted 22.08.2017 28.08.2017
တစ်ဦးတယ်လီဖုန်းနံပါတ်သုံးပြီးမေးလ် recover လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? အဘယ်သူသည်ငါ့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပြဿနာနှင့်အတူရငျဆိုငျ! တုန့်ပြန်ချန်နယ်မထားပါနဲ့။ အဆိုပါလီနာ၏ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ links ။ အဆိုပါဂိမ်းလှဲ။ , သင်သည်သင်၏ password ကို recover ချင်လျှင်, အ Enrages ...
အထောက်အပံ့အဖွဲ့ကဆက်သွယ် Mail.ru? ကြိုဆိုပါတယ်! တန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုငါဒေတာပြောင်းလဲသွား zlomalii, သင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်ကူညီပေးပါ။ ငါထောက်ခံမှုမှတဆင့် restore ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်သူတို့ကသငျသညျအနည်းငယ်သာသတင်းအချက်အလက်ရှိသည်ဟုဆိုသည်။ ငါတတ်နိုင်သမျှ ...
မင်္ဂလာဆောင်၏ Avatar သကျသခေံ assign လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?!
မင်္ဂလာဆောင်၏ Avatar သကျသခေံ assign လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?! Hurray ကိုရွှေသငျသညျ4Hurray ကိုရွှေရေးပေးဖို့ရှိသည်မည်မျှ mache ထံသို့လာကွသို့မဟုတ်ထုပ် nazhmitef5 vyberaem kamentariyah4အတွက်ရေးပေးရမည်နှင့်အ ...
အဘယ်အရာကိုတစ်ဦးငွေပေးငွေယူအရေအတွက်ကဖြစ်သနည်းထိုအခါငါဘယ်မှာသင်ယူနိုင်သလဲ hello hello ငါသိလက်ခံရရှိအရေအတွက်ကို Platja ရှာတွေ့ဖို့ဘယ်လို။ ငါ Yandex-ငွေနှင့်တစ်ကဒ်လွှဲပြောင်းစေ။ ပိုက်ဆံကဒ်ပေါ်မှာကျန်ရစ်ပေမယ့်မလာခဲ့ပါဘူး။ ...
Internet Explorer ကို 8 အပေါ် Java Script ကို enable ဖို့ဘယ်လို?
"Woe from Wit" ၏ 26 အက္ခရာအားလုံး၏စာရင်းလိုအပ်သည်။
A. S. Griboedov မှ“ Woe from Wit” အလုပ်၏ 26 အက္ခရာများအားလုံး၏စာရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်။ ဝီဟာသဇာတ်ကားလေးခုတွင်အပြုသဘောဆောင်သောအပြုအမူ။ လှုပ်ရှားမှု - ဆိုဖီယာအများပြည်သူနေရာမန်နေဂျာ Pavel Afanasevich Famusov
ကျွန်ုပ်မည်သို့အီးမေးလ်လိပ်စာကိုပြောင်းလဲစေသလဲ? သင်သာကံမကောင်းမဟုတ်ဘဲတတ်နိုင်သမျှ, ပုံစံကိုပြောင်းလဲနှင့် e-mail ကိုပြောင်းလဲမှုကိုပေးနိုင်သည်။ အသစ်တစ်ခုကို Create, ဒါ) မျှလိပ်စာအဘယ်အရာကိုစိတ်ပူစရာမဟုတျလော မေးလ်နောက်ထပ် box ကိုစေလျှင်
ပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့အီးမေးလ်များကို recover လုပ်ဖို့ဘယ်လို ???
ပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့အီးမေးလ်များကို recover လုပ်ဖို့ဘယ်လို ??? # အဆိုပါမေးလ်ထဲမှာ udalnnye အက္ခရာများ restore ဖို့ဘယ်လို 1Pered, သင်ဖယ်ရှားခဲ့ပြီးထိုသို့တည်ရှိခဲ့သည်ဘယ်မှာအချက်အလက်များ၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုမှတ်မိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီတော့လျှင်ဒေတာ, ထိုကဲ့သို့သောဖိုလ်ဒါထဲမှာတည်သည် ...
ယင်းဖောင့်ရဲရင့်အောင်ဘယ်လိုနေသလဲ? html-tags များကိုသုံးပါ။ သူတို့ကိုငါဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲနားမလည်ကြဘူး။
အပေါ် Posted 21.08.2017 28.08.2017
ယင်းဖောင့်ရဲရင့်အောင်ဘယ်လိုနေသလဲ? html-tags များကိုသုံးပါ။ သူတို့ကိုငါဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲနားမလည်ကြဘူး။ Hmm AAAA စာလုံးစောင်းသင်သည်ထိုသို့သောအားဖြင့်ကမီးမောင်းထိုးပြ, နှစ်ဖက်စလုံးတွင်စာသားပိတ်ဖို့ Tagged ။ အဆိုပါ tags များနှင့်စာသားအကြား ...
ကအမည်ဝှက်စာတစ်စောင်ပေးပို့ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိ? အဆင့်တဦးတည်းထိုသို့သောအင်တာနက်ကဖီးအဆင့်နှစ်အဖြစ်ကျွမ်းတဝင်မရှိသောအရပ်သို့သွားရ: စာတစ်စောင် Method ကိုတဦးတည်း Send: သင်တစ်နေရာရာအမည်မသိ e-mail,, ၏နာမတော်ကိုပေးပို့ခြင်းအသစ် box ကိုမှတ်ပုံတင်နိုင် ...
ဒါဟာဆက်ဆက်ခေတ်မမီတော့အဖြေများ၏အစွန်းရောက်မြောက်ဘက်တွင်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလက်မှတ်များ၏ဥပမာများကဲ့သို့ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်။ ဤအချက်အလက်ကနေမြောက်ဘက် -302-ဎ Irina အသစ်တစ်ခုပုံစံ? prompt pliz- အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဤသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလက်မှတ် ...
အပေါ် Posted 20.08.2017 28.08.2017
အသုံးပြုသူတစ်ဦးအကောင့်ကဘာလဲ? အသုံးပြုသူတစ်ဦးကကွန်ပျူတာစနစ်ကိုယ်တိုင်ကသတ်မှတ်သတင်းအချက်အလက််နှုတ်ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်စံချိန်။ အပြန်အလှန်ဖလှယ်နေ့စဉ်အသက်တာ၌ဘန်းစကားအသုံးအနှုန်းများကနေအကောင့်နှင့်အကောင့်တစ်ခုသုံးနိုင်တယ် ...
ငါစာမကျြနှာ kontakt.kak သွားလာရင်းအတွက်သင်၏ login နဲ့ password မေ့လျော့ကြသလော
အဆက်အသွယ်ရှိအသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်ကိုမေ့သွားတယ်။ စာမျက်နှာကိုဘယ်လိုသွားနိုင်မလဲ။ အီးမေးလ်ဖြင့် စတင်ရန်လော့ဂ်အင်နှင့်လျှို့ဝှက်နံပါတ်ထည့်ရန်အကွက်များအောက်ရှိအဆက်အသွယ်ရှိဆိုက်၏ပင်မစာမျက်နှာကိုသွားပါ။
ဘယ်လို vosctanovit စာတိုက်ပုံး mail.ru အပေါ်
ဘယ်လို vosctanovit စာတိုက်ပုံး mail.ru အသုံးပြုသူပေါ်တွင်သင်၏စာတိုက်ပုံး restore မှကိုယ်တိုင်ကိရိယာမှရပါမည်။ ငါသာအရိပ်အမြွက်ပေးနိုင်ပါသည်။ http: မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် access ကို restore မနိုင်လျှင်ချက်ချင်းအကွံဉာဏျ Read e-mail, မှ //otvet.mail.ru/question/172719793 access ကို ...
အဘယ်အရာကို trolling သလဲ?
trolling ဆိုတာဘာလဲ ဤသည်“ အဖြေများ” ပေါ်ရှိသတင်းစကားများ၏ 90% ဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ပေါ်တွင်ရိုင်းပျခြင်းဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ဝေါဟာရများတွင် troll ဆိုသည်မှာအင်တာနက်ပေါ်တွင်ရိုင်းစိုင်းသောသို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်သောမက်ဆေ့ခ်ျများတင်ထားသူ၊
ကြောင်းနိမ်ရန်ဖြစ်ပါသည်? အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှမဆိုအရာဝတ္ထု၏ယိုယွင်းပျက်စီးလာ၏ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်နောက်ပြန်လှုပ်ရှားမှုတဖြည်းဖြည်းယိုယွင်းပျက်စီးလာ, ကျဆင်းမှု, သဘာနှင့်အချိန်တို့၏ဥပဒေများဖြင့်ပြင်ပသက်ရောက်မှုကြောင့်ဒီကိစ္စကိုဖျက်ဆီးခြင်း၏ပျက်စီးခြင်း။ degradation ...
သင်သည်အဘယ်သို့ 100 ရက်ပေါင်းလာလျှင်ဆုသည့်ကိုယ်စားပြုပုံကိုအားပေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်
သငျသညျငါအခမဲ့ဘို့ရွှေအဘို့အထိတ်လန့် ..poyavilas အစီအစဉ်တွင်ပေါ့ 100 ရက်ပေါင်းလူတွေလာလျှင်ကိုယ်စားပြုပုံမှပေးသောဆုကဘာလဲ! ဒါဟာအလွန်လွယ်ကူသည်! ထိုသို့မခက်ခဲပါ! အရမ်းကောင်းသောယေဘုယျအားဖြင့်ဆု ...
ဒါဟာလဲဖြစ်နိုင်မ podlevoy ဂေါ်ပြားခုတ်တပြင်လုံးကိုနေ့ဖြစ်၏။
တစ်နေ့လုံးသူသည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဆိုးကျိုးများနှင့်ထိုးနှက်နေသည်။ ဘယ်ဘက်ပခုံးဓါးအောက်တွင်နာကျင်မှုရှိသောရောဂါများ - အစာအိမ်အနာ၏အဓိကလက္ခဏာမှာနာကျင်မှုဖြစ်သည်။
Desktop ပေါ်မှာ mail.ru home page ကိုအောင်ဖို့ဘယ်လို
ဘယ်လိုမင်္ဂလာပါ Desktop ပေါ်မှာ mail.ru home page ကိုဖြစ်စေ, Mail.Ru သင့်ရဲ့ home page ကိုအမြဲလျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့အီးမေးလ်များကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ထိုသူတို့အားတုံ့ပြန်လာနိုင်မှ Make, ငါတို့သည်သင်တို့ကြောင်းအကြံပြု ...
အပေါ် Posted 15.08.2017 28.08.2017
mail.ru တွင်မေးခွန်းတစ်ခုမည်သို့မေးရမည်နည်း။ ဤတွင် - သင်သည်သင်၏ပထမဆုံးမေးခွန်းကိုမေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ) စီမံကိန်း၏အပြာရောင်ခေါင်းစီးတွင်တည်ရှိသော "ask" ခလုတ်ကိုသင်နှိပ်ရမည်။ ) ထို့နောက်ခေါင်းစဉ်ဘားတွင်ချက်ချင်းရေးပါ ...
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,387 စက္ကန့်ကျော် Generate ။